Umkhiqizi nomhlinzeki wasekhaya waseChina | I-Mestech
Idizayini yokusebenzisa izinto zasekhaya ukuthuthukisa ukubukeka nengaphakathi lemishini yasendlini. Kubandakanya ukwakheka kwezingxenye zepulasitiki nezingxenye zensimbi.
Kulezi zinsuku, izidingo zabantu zemishini yasendlini akuyona imisebenzi nje kuphela, kepha futhi nezidingo zobuhle zokubukeka okuhlukile, okwenziwe ngezifiso nobuciko.
Idizayini yemishini kagesi yasendlini isuselwa ezintweni zepulasitiki nezensimbi, kuhlanganiswe nomqondo wobuciko wabantu nesakhiwo sokusebenza komkhiqizo, kusetshenziswa isoftware ye-3D design ukuklama ukubukeka nokwakheka komkhiqizo, futhi ekugcineni kukhishwe imidwebo yokukhiqizwa kwesikhunta nezingxenye.
IMestech inikezela amakhasimende ngalokhu kuklanywa komkhiqizo we-elektroniki olandelayo:
(1) Izinto zasendlini ezisebenza wena uqobo: ikakhulu kufaka isomisi sezinwele, i-shaver kagesi, ikhanda lensimbi kagesi, ibhulashi lamazinyo kagesi, insimbi yobuhle ye-elekthronikhi, i-massager kagesi, njll.
(2) Ukusetshenziswa komuntu siqu kwemikhiqizo yedijithali: ikakhulukazi ama-computer ama-tablet, izichazamazwi ezisebenza ngogesi, imishini yokufunda isundu, imishini yemidlalo, amakhamera edijithali, imikhiqizo yezemfundo yezingane, njll
(3) Imishini yasekhaya: ikakhulukazi ifaka umsindo, i-heater kagesi, i-humidifier, i-air purifier, i-dispenser yamanzi, i-doorbell, njll.
Umklamo womkhiqizo we-elekthronikhi wasekhaya
Umshini wokufunda ngezwi wezingane
Iphrojektha yedijithali yomndeni
Izici zokwakha zemishini yasendlini kagesi
1.Ukwakhiwa kwezinto zikagesi zasendlini ukwakheka kokubukeka, ukwakheka kohlaka jikelele kanye nokwakheka kwezingxenye ezithile. Ngokungafani nemishini yezimboni,
(1) Gcizelela ukwakheka kokubukeka okubonakalayo, izici nokuzenzela.
(2) Gcizelela isipiliyoni sabasebenzisi. Njengokusebenza okunethezekile, okulula ukuphatha, insimu engenamanzi
(3) .Gxila kusayizi, ivolumu kanye nesisindo somkhiqizo womkhiqizo.
(4) .Usly ukuhlobisa ukubukeka imikhiqizo 'ngosizo ukuthungwa, electroplating, imidwebo, usilika screen kanye nezinye inqubo ukwelashwa ebusweni.
2.Ngenxa yokuthintana nsuku zonke nomzimba womuntu, izinto zasendlini ezisebenza ngogesi zinezidingo eziqinile zokuphepha
(1). izinto ezisetshenzisiwe azinabungozi emzimbeni womuntu Kunezinhlobo ezintathu zamazinga weRoHS, ukufinyelela kanye no-3C eChina. Izinto ezinobungozi eziqukethwe kumazinga wezingxenye zomkhiqizo
(2) Imisebe kagesi kagesi ayibe ngaphezulu kwezinga lokuphepha elamukelwe ngumzimba womuntu Imisebe kagesi kagesi ingathinta impilo yabantu. Imikhiqizo ye-elekthronikhi, ikakhulukazi imikhiqizo yezokuxhumana ethembele kumasiginali angenantambo, izokhipha imisebe kagesi kagesi. Ekuklanyeni kwemikhiqizo enjalo, kuyadingeka ukunciphisa inani lemisebe kagesi liye ebangeni eliphephile.
(3) Ukufakwa kukagesi: kwezinye izinto zasendlini ezinamandla aphezulu okusebenza (i-AC), ukuvuza okuvikelekile, ukwahlukanisa noma ukwakheka okungangenwa ngamanzi kufanele kwenziwe ekwakhiweni komkhiqizo ukugwema izingozi zokuphepha.
IMestech inikezela ngamakhasimende nge-OEM design, ukukhiqizwa kwesikhunta, ukukhiqizwa kwezingxenye nokuhlangana kwemikhiqizo ejwayelekile yasekhaya ye-elekthronikhi. Ngiyethemba ukuthi amakhasimende adinga ukuxhumana nathi, sizokunikeza insizakalo yethu enhle kakhulu.
Langaphambilini Idizayini yezindlu ezakhiwe ngogesi
Olandelayo: Umklamo womkhiqizo wePlastiki
Ama-reels epulasitiki ekhebula nocingo